Wararka - Mabda'a iyo astaamaha walxaha afuufa kiimikada
Mabda'a iyo astaamaha wakiilada afuufa kiimikada
Kiimikooyinka afuufa kiimikada Waxyaalaha kiimikada afuufa sidoo kale waxaa loo qaybin karaa laba nooc oo waaweyn: kiimikada dabiiciga ah iyo kiimikooyinka aan dabiici ahayn. Waxaa jira noocyo badan oo ah walxaha kiimikada afuufa ee kiimikada, halka walxaha kiimikada afuufa ee aan dabiici ahayn ay xadidan yihiin. Wakiiladii ugu horreeyay ee kiimikada afuufa (qiyaastii 1850) waxay ahaayeen kaarbootiin aan dabiici ahayn iyo bicarbonates. Kiimikooyinkan waxay sii daayaan CO2 marka la kululeeyo, aakhirkiina waxaa lagu beddelaa isku dar ah bicarbonate iyo citric acid maxaa yeelay kan dambe ayaa leh saameyn aad u fiican oo saadaalin ah. Wakiilada xumbaynaya ugxanta ee aan fiicnayn maanta waxay asal ahaan leeyihiin farsamo kiimiko ah sida kor ku xusan. Waxay yihiin polycarbonates (asalka asalka ah waa Poly-carbonic)
asiidh) oo lagu qaso kaarboonka.
Burburka polycarbonate waa falcelin kuleylka jirka, oo ah 320 ° F
Qiyaastii 100cc halkii garaam oo aysiidh ah waa la sii deyn karaa. Marka bidix iyo midig CO2 ay sii kululaato qiyaastii 390 ° F, gaas badan ayaa la sii deyn doonaa. Dabeecadda kuleylka ah ee fal-celinta burburka ayaa laga yaabaa inay keento faa'iidooyin qaar, maxaa yeelay kuleylka ku faafidda inta lagu gudajiro habka xumbadu waa dhibaato weyn. Marka laga soo tago ahaanshaha ilaha gaaska ee xumbada, walxahan waxaa badanaa loo isticmaalaa inay yihiin wakiilo nukliyeer ah oo loogu talagalay wakiilada xumbada jirka. Waxaa la rumeysan yahay in unugyada bilowga ah ee la sameeyay markii uu sunta kiimikada afuufa ay meel u haajiraan gaaska uu sii daayo wakiilka afuufa jirka.
Ka soo horjeedka wakiilada xumbada aan caadiga ahayn, waxaa jira noocyo badan oo kiimikooyin kiimiko ah oo xumbada ka xulo, qaababka jirkooduna sidoo kale way ka duwan yihiin. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, boqolaal kiimiko dabiici ah oo loo adeegsan karo inay yihiin wakiillo wax afuufa ayaa la qiimeeyay. Waxa kale oo jira shuruudo badan oo loo isticmaalo in lagu xukumo. Kuwa ugu muhiimsan ayaa ah: hoosta xaaladaha xawaaraha la xakamayn karo iyo heerkulka la saadaalin karo, qadarka gaaska la sii daayay ma aha oo kaliya weyn, laakiin sidoo kale waa la soo saari karaa; gaasaska iyo adkaha ay soo saarto falcelintu waa kuwa aan sun ahayn, waana ku fiican tahay xumeynta polymerization. Sheygu waa inaysan yeelan wax saameyn ah oo xun, sida midab ama ur xun; ugu dambeyntiina, waxaa jira arrin kharash ah, oo sidoo kale ah qiimeyn aad u muhiim ah. Wakiillada xumbada loo adeegsado warshadaha maanta waxay aad ugu habboon yihiin shuruudahan.
Wakiilka xumbada kuleylka kuleylka leh waxaa laga xushay wakiilo badan oo kiimiko ah oo xumbaynaya. Dhibaatada ugu weyn ee la tixgelinayo ayaa ah in heerkulka kala-baxa ee wakiilka xumbayntu ay tahay inuu la jaan qaado heerkulka wax soo saarka ee caagga ah. Laba walxo kiimiko dabiici ah oo afuufa ayaa si ballaaran loo aqbalay heerkulka hoose ee polyvinyl chloride, polyetylen-cufnaanta hoose iyo qaar ka mid ah walxaha epoxy. Midka hore waa toluene sulfonyl hydrazide (TSH). Kani waa budada jaalaha ah ee kareemka leh heerkulka kala-baxa ee ku dhowaad 110 ° C. Garaam kasta wuxuu soo saaraa qiyaastii 115cc oo nitrogen ah iyo xoogaa qoyaan ah. Nooca labaad waa feeraha oksidhiska ah (benzenesulfonyl), ama OBSH. Wakiilka xumbaynaya waxaa badanaa loo isticmaali karaa codsiyada heerkulka hooseeya. Maadadani waa budo ganaax cad oo heerkulkeeda caadiga ah ee burburka waa 150 ° C. Haddii la adeegsado dhaqaajiyaha sida urea ama triethanolamine, heerkulkan waxaa loo yareyn karaa ilaa 130 ° C. Garaam kasta wuxuu soo saari karaa 125cc oo gaas ah, badanaa nitrogen. Shayga adag ka dib marka uu burburo OBSH waa polymer. Haddii loo wada isticmaalo TSH, waxay yareyn kartaa urta.
Wakiilka xumbada kuleylka badan Heerkulka balaastigga sare, sida ABS-kuleylka u adkeysata, polyvinyl chloride adag, qaar polypropylene-yo dhalaalaya oo hooseeya iyo caaga injineernimada, sida polycarbonate iyo nylon, isbarbar dhig isticmaalka wakiilada afuufa leh heerkulka sare ee kala-baxa. Toluenesulfonephthalamide (TSS ama TSSC) waa budo cad oo aad u fiican oo leh heerkulka kala-baxa ee ku dhowaad 220 ° C iyo soosaarka gaaska ee 140cc halkii gram. Inta badan waa isku dar ah nitrogen iyo CO2, oo leh qadar yar oo ah CO iyo ammonia. Wakiilkaan afuufayaa waxaa badanaa loo isticmaalaa polypropylene iyo ABS qaas ah. Laakiin sababtoo ah heerkulka kala-baxa, ku-adeegsiga polycarbonate wuu xadidan yahay. Wakiil kale oo afuufaya-heer sare-5-tetrazole (5-PT) ayaa si guul leh loogu isticmaalay polycarbonate. Waxay bilaabmaysaa inay si tartiib tartiib ah u baabi'iso qiyaastii 215 ° C, laakiin wax soo saarka gaaska ma badna. Qaddar badan oo gaas ah lama sii deyn doono illaa heerkulku gaaro 240-250 ° C, heer kulkaasina aad buu ugu habboon yahay ka shaqeynta polycarbonate. Wax soo saarka gaasku waa qiyaastii
175cc / g, badanaa nitrogen. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira xoogaa ka soo horjeedka tetrazole oo hoos imanaya horumarinta. Waxay leeyihiin heerkulka burburka sare waxayna sii daayaan gaas ka badan 5-PT.
Heerkulka waxsoosaarka ee ugu badan ee thermoplastics-ka warshadaha ee azodicarbonate waa sida kor lagu sharaxay. Kala duwanaanta heerkulka wax-soo-saarka ee ugu badan polyolefin, polyvinyl chloride iyo terrene thermoplastics waa 150-210 ° C
. Caag noocan ah, waxaa jira nooc ka mid ah wakiilka wax afuufa ee lagu kalsoon yahay in la isticmaalo, taasi waa, azodicarbonate, oo sidoo kale loo yaqaan azodicarbonamide, ama ADC ama AC oo la soo gaabiyo. Xaaladda saafiga ah, waa budada huruud / liimaan ah oo qiyaastii ah 200 ° C
Ku billow inaad qudhmi karto, iyo xaddiga gaaska ee la soo saaray inta lagu gudajiray burburka ayaa ah
220cc / g, gaaska la soo saaray badanaa waa nitrogen iyo CO, oo leh qadar yar oo CO2 ah, sidoo kale waxaa ku jira ammonia xaalado gaar ah. Wax soo saarka burburka adag waa midab leh. Looma isticmaali karo oo keliya tilmaan ahaan burburka buuxa, laakiin sidoo kale wax saameyn ah kuma yeelanayso midabka caagga xumbada leh.
AC waxay noqotay wakiilka xumbada xumbada si ballaaran loo isticmaalo dhowr sababood awgood. Marka laga hadlayo soo saarista gaaska, AC waa mid ka mid ah wakiilada xumbada ugu wax ku oolka badan, gaaska ay sii deyso wuxuu leeyahay waxtarka xumbada badan. Intaa waxaa dheer, gaaska si dhakhso leh ayaa loo sii daayaa iyada oo aan lumin xakamaynta. AC iyo alaabteeda adag waa walxo sun yar. AC sidoo kale waa mid ka mid ah wakiilada kiimikada ugu jaban, mana ahan kaliya wax soo saarka gaaska halkii garaam, laakiin sidoo kale wax soo saarka gaaska halkii doolar waa mid aad u jaban.
Marka lagu daro sababaha kor ku xusan, AC waxaa loo isticmaali karaa si ballaaran sababtoo ah astaamaha burburka. Heerkulka iyo xawaaraha gaaska la sii daayay waa la beddeli karaa, waxaana lagula qabsan karaa 150-200 ° C
Ku dhowaad dhammaan ujeeddooyinka ku jira baaxadda. Firfircoonida, ama ficilada lagu daro ee wax lagu daro waxay badalayaan astaamaha burburka ee wakiilada afuufa kiimikada, dhibaatadan waxaa looga hadlay isticmaalka OBSH ee kor ku xusan. AC waxay si firfircoon uga hawlgashaa walxaha kale ee kiimikada afuufa. Waxaa jira noocyo kala duwan oo lagu daro, ugu horreyntii, cusbada birta ayaa yareyn karta heerkulka kala-baxa ee AC, iyo heerka hoos u dhaca wuxuu inta badan ku xiran yahay nooca iyo xaddiga lagu daro ee la xushay. Intaa waxaa dheer, waxyaabaha lagu daro sidoo kale waxay leeyihiin saameyn kale, sida inay beddelaan heerka sii deynta gaaska; ama abuuraya dib-u-dhac ama xilli soo-gelin ka hor intaan falku bilaabmin. Sidaa darteed, ku dhowaad dhammaan hababka sii deynta gaaska ee geeddi-socodka ayaa loo qaabeyn karaa si farshaxan ah.
Cabirka walxaha AC ayaa sidoo kale saameynaya habka kala-baxa. Guud ahaan marka laga hadlayo, heerkulka la bixiyo, ka weynaanshaha cabbirka walxaha, ayaa sii deynaya gaaska sii deynaya. Dhacdadani waxay si gaar ah ugu muuqataa nidaamyada firfircoonida leh. Sababtan awgeed, qiyaasta cabbirka walxaha ee ganacsiga AC waa 2-20 mikroonoon ama ka weyn, oo isticmaalaha ayaa dooran kara hadba sida uu doono. Qaar badan oo ka mid ah processor-rada ayaa soo saaray nidaamyadooda waxqabad ee u gaarka ah, qaar ka mid ah soo saarayaashana waxay doortaan isku-darka isku-dhafan ee horay loo hawlgeliyey ee ay bixiyeen soo saarayaasha AC. Waxaa jira xasiliyaal badan, gaar ahaan kuwa loo isticmaalo polyvinyl chloride, iyo midabbada qaar ayaa u dhaqmi doona sida firfircoonida AC. Sidaa darteed, waa inaad taxaddar muujisaa markaad beddeleyso qaaciidada, maxaa yeelay astaamaha kala-baxa ee AC way is beddeli karaan si waafaqsan.
AC-ka laga heli karo wershadaha ayaa leh buundooyin badan, oo aan ku xirnayn oo keliya cabirka walxaha iyo nidaamka hawlgelinta, laakiin sidoo kale marka la eego dheecaanka. Tusaale ahaan, ku darista wax lagu daro AC waxay kordhin kartaa dheecaanka iyo kala-baxa budada AC. Noocan AC wuxuu aad ugu habboon yahay plastisol PVC. Sababtoo ah wakiilka xumbada ayaa si buuxda loogu kala firdhin karaa plastisol, tani waa arrin muhiim u ah tayada badeecada kama dambaysta ah ee xumbay. Marka lagu daro isticmaalka darajooyinka leh dareeraha wanaagsan, AC sidoo kale waxaa lagu kala firdhin karaa phthalate ama nidaamyada kale ee side. Waxay noqon doontaa sida ugu fudud ee loo maareeyo sida dareeraha oo kale.